Ammaanka Maxkamadda Sare Iyo Xeer-Ilaalinta Qaranka Oo Aad Loo Adkeeyey – Hornafrik Media Network
Wasiirka gaashaandhiga oo Sheegay in culeys badan ay saareen Al-Shabaabka ku sugan…
Ammaanka Maxkamadda Sare Iyo Xeer-Ilaalinta Qaranka Oo Aad Loo Adkeeyey
Ciiddamo dheeraad ayaa lagu xoojiyey Askartii horey ilaalada uga ahayd Xarunta Maxkamadda Sare iyo Xafiiska Xeer-ilaalinta Qaranka ee ku yaalla Degmadda Xamar-weyne ee magaalladda Muqdisho.
Ilo lagu kalsoon yahay ayaa u sheegay HornAfrik inay Ciiddanka Ammaanka heleen warar ku aadan inay dhici karto in gawaari miineysan lagu soo weeraro Xarumahaasi.
Shalay ayaa mar qura lagu kala cararay Xarunta Maxkamadda markii la sheegay warar sheegaya in Qarax ku soo wajahan yahay, Waxaana gabi ahaanba kala cararay Shaqaalihii Garsoorka, iyadoo Maantana aysan halkaas imaan Shaqaale badan. Sidoo kale dadkii u imaan jiray Dacwadaha ayaa iyaguna ka baqay imaanshaha Maxkamadda, sababo la xiriiro Digniinaha ku saabsan Suurtagalnimadda Weerar Argagixisanimo oo lagu qaado Xaruntaasi.
Dhinaca kale, Ciiddanka Ammaanka ayaa la sheegay inay si taxadir leh u baarayaan Gaadiidka isticmaala Waddooyinka Degmadda Xamar-weyne iyo goobaha ku dhow-dhow, si aysan Gaadiidka miineysan ugu suurto-gelin inay qaraxyo ka geystaan Xamar Weyne.
Bishii October 14-dii iyo 28-dii waxay Qraaxyo ka kala dhaceen Isgoyska Zoope iyo Hotelka Naasa Hablood 2 ee Degmadda Xamar-weyne, iyadoo ay boqolaal qof ku geeriyootay, kuna dhaawacmeen Qaraxyadaasi..
Gawaarida AMISOM oo laga baqayo in loo adeegsado weerar Al-shabab ku qaadaan Garoonka Aadan Cadde
Sideey Muqdisho ku gaari kartaa Nidaam iyo Istrataatiijiyad Amni oo la isku Halayn karo,?
reporter	 May 17, 2019 0
Faahfaahin:- Askar ka tirsan Puntland oo xalay lagu qarxiyay Boosaaso
reporter	 May 11, 2019 0